ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်ခြင်းသတ္တုသိုလှောင်ပစ္စည်းသတ္တုကွန်တိန်နာ,ပုံဖမ်းတွန်းလှည်း,Pallet,ထိန်သိမ်း,roll ကွန်တိန်နာ etc - Foshan Yougu သိုလှောင်ပစ္စည်း Co. , Ltd မှ
Foshan Yougu Storage Equipment Co. , Ltd သည်သတ္တုကုန်လှောင်ရုံသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသိုလှောင်ခြင်းလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးကိုဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းတွင်အထူးပြုခဲ့သည်,လှောငျအိမျ, pallet, ပုံဖမ်းတွန်းလှည်း, ထိန်သိမ်း stacking,လုံးဝသိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်ပေးသူဖြစ်သည့်စသည်တို့ pallet. ကျော်လွန် 7000 စတုရန်းမီတာစက်ရုံအလုပ်ရုံ 56 machine.with ၏ set ကိုမျိုး 89 ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လုပ်သားများနှင့်အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့က, QC အဖွဲ့နှင့်အခြားရုံးပစ္စည်းပစ္စယ .
ကျနော်တို့အတွက် ISO9001-2000 လွန် 2016 နှင့်ကျော်ကိုထောကျပံ့ 500 ဟွန်ဒါအတွက် customers.has မြင့်မားတဲ့ဂုဏ်သတင်း, တိုယိုတာ, Volkswage ,Midea, Gree, TCL,Galanz,Coca-Cola,JD,DHL and others Yougu provides factory directly competitive price and high quality products for customers ,ဒီဇိုင်းအတွက်အထူးနှင့်သင့်တောင်းဆိုမှုကိုသို့မဟုတ်အသုံးပြုမှုအရသိရသည်စိတ်ကြိုက် .
ကျော်လွန် 15 နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိသောအင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့နှင့်အလုပ်သမားများ။ ဖောက်သည်အသုံးပြုမှုနှင့်အညီစုပေါင်းဖြေရှင်းချက်များ.
ကုန်ပစ္စည်းတိုင်းသည်ဖောက်သည်များ၏တောင်းဆိုမှုကို SGS နှင့်ကိုက်ညီစေရန်တင်းကြပ်သောအရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်,ISO
Peugeot ကဲ့သို့သောကျော်ကြားသောဖောက်သည်များစွာနှင့်အထောက်အပံ့, တိုယိုတာ ,Huawei စသည်, စက်ရုံများသည်အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းကိုထိန်းသိမ်းသည်.
စက်မှုဇုန် pallet ထိန်သိမ်းသံမဏိ pallet ထိန်သိမ်းစိတ်ကြိုက် pallet ထိန်သိမ်းဝါယာကြိုး
ကောင်းသောတံဆိပ်ခတ်ထုံးစံသတ္တုလှောင်အိမ် features တွေ